छिमेकी परिवार अभ्यास (NFP) हाम्रो समुदायमा बस्नेहरूलाई COVID-19 खोपहरू प्राप्त गर्न ओहायो स्वास्थ्य विभागको दिशानिर्देशहरू पूरा गर्नेहरूलाई COVID-19 खोपहरू प्रदान गर्न पाउँदा खुसी छ।
NFP ले हाल5वर्ष र माथिकाहरूलाई खोपहरू प्रदान गर्दैछ। भ्याक्सिन ब्रान्डहरूको उपलब्धता भिन्न हुन्छ, तर हामीले FDA द्वारा अनुमोदित भ्याक्सिनहरू मात्र विशेष उमेर समूहहरूको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं।
भ्याक्सिन अपोइन्टमेन्ट शेड्यूल गर्न, अनलाइन तालिका बनाउन तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा COVID-19 परीक्षणको समय तालिका बनाउन आवश्यक छ भने, 216.281.0872 मा कल गर्नुहोस्।
COVID-19 बाल रोग खोपहरू
CDC दिशानिर्देशहरू र अनुमोदनहरू अनुसार, NFP ले अब 5-11 उमेरकाहरूलाई Pfizer खोप प्रदान गर्दछ।
COVID-19 भ्याक्सिन बूस्टर शटहरू
18 वर्ष वा माथिका कुनै पनि व्यक्ति प्रारम्भिक दुई-डोज श्रृंखला प्राप्त गरेको कम्तिमा छ महिना वा एकल-डोज Johnson & Johnson खोप प्राप्त गरेको दुई महिना पछि Pfizer वा Moderna COVID-19 खोपको एकल बुस्टर डोजको लागि योग्य छन्।
COVID-19 खोप दोस्रो बूस्टर शटहरू
निम्न व्यक्तिहरू दोस्रो बूस्टरको लागि योग्य छन्, उनीहरूको पहिलो बूस्टर पछि कम्तिमा चार महिना:
50 वर्ष र माथिका व्यक्तिहरू
12 वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरू, एक सम्झौता प्रतिरक्षा प्रणाली संग
कोभिड-१९ खोपको समयतालिका बनाउनुहोस्
COVID-19 को बारेमा थप जानकारी
ODH हटलाइन: 1.833.4.ASK.ODH
ओहायो स्वास्थ्य विभाग (ODH)
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (CDC)
कुयाहोगा काउन्टी स्वास्थ्य बोर्ड
NFP खोप दिशानिर्देशहरू बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी:
NFP मा COVID-19 खोपको लागि आउँदै गरेको 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूले खोप प्राप्त गर्नका लागि आमाबाबु वा अभिभावक वा अभिभावक वा अभिभावकबाट लिखित सहमति प्रदान गर्नुपर्छ।
18 वर्ष मुनिका कुनै पनि रोगी एक वयस्क संग हुनु पर्छ।
खोपको लागि कुनै लागत छैन।
खोपको लागि स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छैन।
खोपका लागि अमेरिकी नागरिकता आवश्यक छैन।
तपाईंले समय तालिका बनाउँदा एक पाठ/फोन कल पुष्टिकरण र तपाईंको अपोइन्टमेन्टको 24 घण्टा अघि रिमाइन्डर प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको अपोइन्टमेन्ट रद्द गर्न आवश्यक छ भने, कृपया टेक्स्ट सन्देशको जवाफ दिएर, वा NFP लाई 216.281.0872 मा कल गरेर त्यसो गर्नुहोस्।
खोप भनेको के हो?
एक खोप एक औषधि हो जसले तपाईंलाई बिरामी हुनबाट बचाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, फ्लू शट एक खोप हो जसले तपाईंलाई फ्लू हुनबाट जोगाउँछ।
मैले COVID-19 खोपको बारेमा के जान्न आवश्यक छ?
तीन फरक कोभिड-१९ भ्याक्सिन बनाइँदै छ। कसैलाई तपाईलाई दुई (2) शटहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईंले पहिलो शट प्राप्त गरेको तीन (3) देखि चार (4) हप्ता पछि दोस्रो शट पाउनुहुनेछ। खोपले काम गर्नको लागि तपाईंले दुवै शटहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। खोप तपाईलाई कुनै शुल्कमा उपलब्ध छ। बीमासँग कुनै शुल्क लाग्दैन र बीमा नगरिएको खण्डमा लागत कभर गर्नका लागि कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन्।
तपाईंले COVID-19 खोप लिँदा के हुन सक्छ भन्ने बारे आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ केही सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले शट लिनुभएको ठाउँमा तपाईंको हात दुखेको हुन सक्छ (जस्तै तपाईंले फ्लूको शट लिँदा), र तपाईंले शट खाइसकेपछि तपाईंलाई थकान वा ज्वरो आउन सक्छ।
COVID-19 खोपको बारेमा पछिल्लो समाचार के छ?
अगस्ट २३, २०२१ सम्म, FDA ले १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका लागि Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको पूर्ण स्वीकृति प्रदान गरेको छ। 12-15 वर्षका व्यक्तिहरूले FDA आपतकालीन प्रयोग प्राधिकरण (EUA) मार्फत Pfizer खोप प्राप्त गर्न जारी राख्न सक्छन्।
Moderna र Johnson & Johnson खोपहरू अझै पनि FDA आपतकालीन प्रयोग प्राधिकरण अन्तर्गत उपलब्ध छन्।
12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू कहिले खोप लिन योग्य हुनेछन् भनेर हाल कुनै समयरेखा छैन।
खोपबाट सम्भावित साइड इफेक्टहरू के हुन्?
धेरैजसो मानिसहरूलाई खोप लगाएपछि गम्भीर समस्याहरू हुँदैनन्। सामान्य साइड इफेक्टहरू दुखाइ, रातो र सुन्निने पाखुरा हुन् जहाँ तपाईंले शट प्राप्त गर्नुभयो। अन्यमा थकान, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, चिसो लाग्ने, ज्वरो आउने र वाकवाकी लाग्ने हुन्छ।
तपाइँको दोस्रो शट पछि साइड इफेक्ट तपाइँले तपाइँको पहिलो शट पछि अनुभव गरेको भन्दा बढी तीव्र हुन सक्छ।
यी साइड इफेक्टहरू सामान्य संकेतहरू हुन् जुन तपाईंको शरीरले सुरक्षा निर्माण गरिरहेको छ र केही दिनभित्रै हट्नुपर्छ।
कुनै पनि साइड इफेक्ट सामान्यतया केहि दिन भित्रै जान्छ। यदि तपाइँ विस्तारित अवधिको लागि साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
के मैले खोप पाएपछि दुखाइ वा असुविधाको लागि आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन वा एन्टिहिस्टामाइन जस्ता ओभर-द-काउन्टर औषधि लिन सक्छु?
खोप लगाउनु अघि यी औषधिहरू लिन सिफारिस गरिएको छैन। यद्यपि, साइड इफेक्टहरू कम गर्न खोप लिएपछि तपाईंले तिनीहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ (यदि तपाईंसँग यी औषधिहरू सामान्य रूपमा लिनबाट रोक्ने कुनै अन्य चिकित्सा कारणहरू छैनन् भने)।
के यो सम्भव छ कि मलाई खोपको तेस्रो डोज चाहिन्छ?
खोपको दुई डोज पाएकाहरूलाई ६ देखि १२ महिनाको बीचमा अर्को डोज लिनुपर्ने हुनसक्ने सम्भावना छ तर यो पुष्टि हुन बाँकी छ। खोपहरूले तपाईंको शरीरलाई अन्तिम उत्पादनमा कति समयसम्म एन्टिबडीहरू मद्दत गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन भइरहेको छ। Moderna र Pfizer दुवैले COVID-19 भाइरसका विभिन्न प्रकारहरू विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खोपहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न परीक्षणहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।
खोपहरूसँग सम्बन्धित कुनै सम्भावित दीर्घकालीन समस्याहरू छन्?
कोभिड-१९ भ्याक्सिनहरू द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका बेला, तिनीहरूको सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सबै कदमहरू चालिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा, FDA र CDC ले खोप सुरक्षाको अनुगमन गर्न जारी राख्छ कि दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू पनि पहिचान गरिएको छ। अध्ययनहरूले खोपहरूबाट प्रतिरोधात्मक क्षमता कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनेछ।
Johnson & Johnson खोपमा पछिल्लो के छ?
23 अप्रिल, 2021 देखि लागू हुने गरी, CDC र FDA ले J&J खोपको ज्ञात र सम्भावित फाइदाहरू यसको ज्ञात र सम्भाव्यताभन्दा बढी रहेको देखाउने यस समयमा उपलब्ध सबै डेटाको समीक्षा गरेपछि J&J खोपको प्रयोग अमेरिकामा पुनः सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ। जोखिमहरू। यद्यपि, ५० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूले विशेष गरी खोप लगाएपछि कम प्लेटलेट्स भएका रगत जम्ने दुर्लभ जोखिमबारे सचेत हुनुपर्छ र यो जोखिम नदेखेको ठाउँमा अन्य COVID-19 खोपहरू (Moderna, Pfizer) उपलब्ध छन्।
कम प्लेटलेट भएको रगत जम्ने दुर्लभ र गम्भीर घटनाको कारण J&J खोपको प्रयोग निलम्बित गरिएको थियो। यो घटना १८ देखि ४९ वर्ष उमेरका प्रति १० लाख खोप लगाउने महिलामा ७ को दरले भएको हो। 50 वर्ष र माथिका महिलाहरू र सबै उमेरका पुरुषहरूको लागि, यो प्रतिकूल घटना अझ दुर्लभ छ।
यहाँ थप सोधिने प्रश्नहरू पढ्नुहोस्
क्याप्शन: Covid-19 को बारेमा सत्य फैलाउनुहोस्
फाइजर भ्याक्सिन सुन्ने सत्र
तपाइँका कर्मचारीहरु माझ खोप हिचकिचाहट को पार गर्दै
COVID-19 भ्याक्सिन टाउन हल फर द डेफ एण्ड हार्ड अफ हियरिङ केन्द्रको साथ
ओहायो COVID-19 भ्याक्सिन टाउन हल हिस्पैनिक/ल्याटिनो ओहायोन्सका लागि - अंग्रेजीमा हेर्नुहोस्
हिस्पानिक/ल्याटिनो ओहायोन्सका लागि ओहायो COVID-19 भ्याक्सिन टाउन हल - स्पेनिशमा हेर्नुहोस्
Medworks: COVID-19 खोप प्रसारण
छिमेकी परिवार अभ्यास हाम्रा बिरामी, कर्मचारी र समुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ। COVID-19 द्रुत रूपमा विकसित भइरहेको अवस्था हो र हामी सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्लिभल्याण्ड विभाग, कुयाहोगा काउन्टी स्वास्थ्य बोर्ड र ओहायो स्वास्थ्य विभागसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। हाम्रा मेडिकल सेन्टरका कर्मचारीहरूले संक्रामक रोगहरू पत्ता लगाउनेलगायत विभिन्न विपद् परिदृश्यहरू प्रयोग गरेर नियमित रूपमा ड्रिल गर्छन्, र यस कोरोनाभाइरससँग प्रयोग गरिने CDC प्रोटोकलहरूको बारेमा सल्लाह दिइन्छ। थप रूपमा, उदीयमान संक्रामक रोगहरूको सबै केसहरूमा जस्तै, CDD को सिफारिसहरू परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई नजिकबाट अनुगमन र अनुसरण गर्दैछौं।